ကျစ်လစ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator > ကျစ်လစ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းကိုမွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် actuators နှင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် actuators အားလုံးသည်အမျိုးအစားအတူတူဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးဦးထုပ်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် module ကိုအလွယ်တကူစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် demounting ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator အားလုံးကိုစွဲစေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ၏ပိုတငျးထုတ်ကုန်များ၏ Interchange နှင့်ဘက်စုံသုံးအာမခံဖို့ ISO5211, DIN3337 (F03-F25) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအညီတည်ဆောက်နေကြသည်။
တိကျသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက် piston နှင့်ထိန်သိမ်းအပေါ် 4. အကွိမျမြားစှာဝက်ဝံနှင့်လမ်းပြသောအနိမ့်ပွတ်တိုက်အားမြင့်မားသံသရာဘဝနှင့်တစ်ဦး blowout အထောက်အထားတောင်တော်အမွေးရိုးတံ။
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအား AOX-P ကို၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွလာ လေထုထဲကနေနှစ်ခု piston အကြားစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ဝင်ပေါက် (2) နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်စဉ်၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကြီးစွန်းမှာစမ်းရေပေါက်တို့သည်အတူကျုံ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည် ဝေဟင်ကနေဖြန့်ချိသည့် piston နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်း ဝင်ပေါက် (4) ထိုအတောအတွင်းည, piston ၏ထိန်သိမ်းက output ရိုးတံ (ဂီယာမောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း anticlockwise လှည့်ဖို့ဘီး) ။ လေထုအရင်းအမြစ်၏ညှနျကွားပြီးနောက် ဖိအား solenoid valve များကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာစမ်းရေပေါက်ကိုစတင် reset နှင့် piston ယင်းနှင့်အတူ elasticity နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့အတင်းအကျပ်နေကြတယ် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်း။ ဤအတောအတွင်းက output ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) တစ်ပြိုင်နက် piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ယာရစ်လှည့်ရန်။ (ထို piston ကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်စုဝေးနေလျှင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, ထို output ကိုရိုးတံတဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် စမ်းရေပေါက်) ဟုအမည်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောသရုပ်ဆောင် SO ရိုက်ထည့် reverse, reset
1. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
2. ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက်အမျိုးမျိုးသောပြပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။ အဆိုပါ Valve WorldãAchemaãအာရှWaterãPCVEXPOãECWATECHã INDOWATER ခုနှစ်, သင်တို့ရှိသမျှကိုအထံသို့လာနိုင်ပါတယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မရှိဘဲ AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်